PSJTV | क्याप्टेन विजय लामाले छात्तीभरि यस्तो ट्याटु खोपेर किन विदेश उडे ?
क्याप्टेन विजय लामाले छात्तीभरि यस्तो ट्याटु खोपेर किन विदेश उडे ?
काठमाडाै‌ं: पछिल्लो समय क्याप्टेन विजय लामासँग सम्बन्धित प्रसंगले नेपाली समाजिक संजाल तथा आम मिडिया तातिरहेको छ । यो परिस्थिति कसरी आयो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नै छ तर यही बीचमा विजय लामा भने अरुले सोचे जस्तो तनाबमा छैनन्, उनी खुसी छन् ।
त्यही खुसियालीमा छात्तीमा ठूलो ट्याटु खोपेर विदेश उडेका छन् । पछिल्लो समय उनीबारे विभिन्न बहसहरु भइरहँदा आखिर विजय लामा कस्तो संघर्ष गरेर यहाँसम्म आए भन्ने विषय पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसो त हामीले तपाई माझ विजय लामाको संघर्षको कथा प्रस्तुत् गरेका छौ ।
गत वर्ष प्रहरीले जाडोको कपडा गर्मी सुरु भएपछि पाए । जाडोभर हिमाली जिल्लामा आलोपालो ज्याकेट लगाएर ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था निम्तियो । समयमै कपडा खरिद नहुँदा गत वर्ष भोगेको समस्या प्रहरीमा यसपालि पनि निम्तिने ...